Wax soosaarka heer sare - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Gelatin-ka 'Gelken' waxaa lagu soo saaray Ningde, Shiinaha. Saldhigga wax soo saar ee horumarsan waxaa la aasaasay 2000, oo leh khadadka wax soo saarka X, wadar ahaanna wax soo saar sanadle ah oo dhan 15,000 tan.
Laga bilaabo xulashada alaabta ceeriin, geeddi-socod kasta oo wax-soo-saar ayaa loo qaabeeyey, la tijaabiyey oo loo hagaajiyey si loo soo saaro alaab gelatin aamin ah, lagu kalsoonaan karo iyo xalalka macaamiisheena iyo suuqyadeena. Isla mar ahaantaana, si loo yareeyo qaladka aadanaha loona hagaajiyo waxtarka wax soo saarka, waxaan isticmaalnaa qalab wax soo saar badan oo warshado hogaaminaya, qalabka wax soo saarka aasaasiga ah ee shirkadda ayaa si toos ah looga keenaa Yurub.
Awood Bixin Xoog leh
Wax soo saarkeena sanadlaha ah wuxuu gaaraa 15,000 tan, wuxuuna ku siin karaa gelatin tayo joogto ah, gaarsiin deg deg ah iyo codsi kala duwan sida ku xusan shuruudaha macaamiisha.
Xulista Waxyaabaha adag, Waxsoosaarka Tooska ah, Maareynta Macluumaadka Sirdoonka, SOP, Aqoonsiga Gaarka ah, Badeecada la Raadin karo
Ka go'naanshaha cilmi baarista iyo horumarinta
Waxaan maal-galino tiro aad u tiro badan oo ah alaab iyo shaqaale bini'aadam ah sanad kasta cilmi baarista iyo howlaha horumarinta si aan u taageerno hal-abuurnimada. Maanta, waxaan leenahay xarunta R&D oo ay weheliyaan 15 injineero iyo 150 shaqaale ah oo soo saara tikniyoolajiyad hoggaamineed kuna dabaqaya gelatinkeenna. Labadii sano ee la soo dhaafay, injineerada Gelken waxay diiwaangeliyeen 19 shati.
Bixinta Adeegyo Habaysan
Nidaam awood leh oo ku siinaya adeeg tayo leh, alaab tayo sare leh. Waxaan diyaar u nahay inaan yareyno kharashyadaada iyo halista oo aan kula kori karno si aan ula jaanqaadno horumarka degdegga ah ee suuqa gelatin.